🥇 Fanamboarana automatique ny famokarana zaitra
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 435
Lahatsary momba ny fanamboarana automatique ny famokarana zaitra
Manafatra automatique fitaterana ny famokarana zaitra
Manamora ny fiainan'ny tompona orinasa sy ny atelier ny automatisation ny kaonty famokarana zaitra ary mamela azy ireo hanaraka ny fotoana. Ny USU dia tsy isalasalana fa izy no mpitarika amin'ireo programa mandeha ho azy ary mendrika ny hojerena. Ny fampitaovana dia novolavolaina mba hahafahan'ny mpampiasa mampiasa azy io mamorona azy io nefa tsy miditra lalina amin'ny fototr'asa mandeha amin'ny laoniny. Ary ny tombony lehibe dia mitoetra amin'ny zava-misy fa ankehitriny ny mekanisation sy ny automatisation ny famokarana zaitra dia tanterahina amin'ny ambaratonga avo kokoa. Fantatsika fa, voalohany indrindra, ny rindrambaiko manam-pahaizana manokana dia tokony hisarika ny mpampiasa amin'ny fanamorana ny fitantanana sy ny fahazoana miditra amin'ny fahazoana fahalalana, tsy tokony handany fotoana be dia be hianarana ny fototry ny fiasana amin'ny programa, manana asa isan-karazany, nefa mitovy ihany ho tsotra ny fotoana. Ny fanaovana automatique ny kaonty famokarana zaitra ao amin'ny 1C dia tranga mahazatra ankehitriny. Fa ny orinasanao dia tena mila an'ity programa sarotra ity izay mitaky fikirana betsaka, fanohanana mitohy avy amin'ireo manam-pahaizana manokana ary fanofanana tsy maintsy ataon'ny mpiasa rehetra? Mazava ho azy fa ny voalaza rehetra etsy ambony dia mitaky fandaniana mitohy, raha ny fividianana ny rafitry ny kaontinay dia tsy midika hoe misy saram-pisoratana anarana mandritra ny fotoana fiasana rehetra, ary afaka mampiasa izany ny olona rehetra - manomboka amin'ny mpivarotra ka hatramin'ny mpitan-kaonty. Tsy ilaina ny mandresy ny zava-tsarotra, ampy ny misafidy amin'ny rafitra iraisana izay ahafahanao manatsara ny fizotran'ny famokarana nefa tsy mandany vola be izany.
Ny famokarana fanjairana dia mifototra amin'ny multistage matetika. Noho izany, ny automatisation-ny dia mikatsaka indrindra ny tanjon'ny fifehezana tanteraka ny dingana rehetra. Io dia ahafahanao mahita ny tena sary ary, mifototra amin'izany dia manaova fanitsiana amin'ny orinasanao. Mandritra izany fotoana izany, ny kaonty dia mety ho tanterahina ao anatin'ny orinasa iray na amin'ny alàlan'ny tambajotran'ireo sampana, amin'ny alàlan'ny fampitahana data tsotra amin'ny Internet. Amin'ny orinasa mpanjaitra dia tena marina izany, satria ny ambaratonga rehetra amin'ny asa, amin'ny ankapobeny, dia zaraina amin'ireo mpiasa isan-karazany. Raha miasa ao amin'ny rafitry ny mandeha ho azy izy rehetra, dia miantoka ny fitohizany izany, manafoana izay lesoka rehetra ary koa miantoka ny mangarahara amin'ny hetsika rehetra.
Ny fampiharana ny fitantanana ny mekanisation sy ny automatisation ny famokarana fanjairana fanjairana dia lasa fototry ny mpanjifa sy mpamatsy, manampy amin'ny fitazonana ny kaonty amin'ny fitaovana sy kojakoja ary manisa ny haavon'ny tahiry ilaina, manara-maso ny asan'ny mpiasa, mizara baiko eo amin'izy ireo, manombatombana amin'ny fahombiazan'ny asa. Miorina amin'ny fotony, ianao dia afaka mampifandray sy mampiasa fitaovana varotra fanampiny, mandeha ho azy ny toeram-piasan'ny kaonty, mitazona kaonty ara-bola ny tapakila sy ny vidiny, miara-miasa amin'ny trosa.
Raha te hanombatombana ny famokarana ny mekanisoran'ny fanjairanao, dia ilaina ny fiasa miaraka amin'ny tatitra: azo atao amin'ny alàlan'ny famantarana rehetra izany, ary ny fampahalalana rehetra dia aseho ho anao ara-maso: latabatra, sary, kisary.
Mandritra izany fotoana izany, ny kaonty momba ny programa automation famokarana fanjairana dia fitaovana matanjaka ihany koa amin'ny fiasana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa: tohanana mpanjifa elektronika, fanontana automativa endrika taratasy, fampandrenesana ny fahavonanan'ny baiko na ny dingana fampiharana azy, fampiroboroboana ary tolotra, fihenam-bidy ary fanokana ho an'ny lisitr'ireo vidiny.
Ny fiasanay dia tsy mandeha fotsiny, fa mandray ny toetra mampiavaka ny orinasa tsirairay avy, mampifanaraka, indrindra, amin'ny orinasa mpanjaitra, manaporofo ny fahombiazany hatramin'ny andro voalohany.
Ity ambany ity ny lisitra fohy amin'ireo fiasa USU. Ny lisitry ny azo atao dia mety miovaova arakaraka ny fikirakira ny rindrambaiko novolavolaina.
Fametrahana mora ny programa, fanombohana haingana, tsy fitoviana amin'ny angon-drakitra momba ny solosaina;
Ny fotoana hampifanarahana hiasa amin'ny mandeha ho azy dia kely dia kely; azonao atao ny mahatakatra ilay rindrambaiko ary manangana ny fizotran'ny automatique ao anatin'ny iray andro monja;
Tsy toy ny karazana fampiharana hafa, USU dia tsy mitaky fampiasam-bola tsy tapaka; ianao dia tsy mandoa afa-tsy amin'ny fividianana programa misy safidy feno;
Ny automatisation sy ny mekanisation an'ny zaitra manjaitra dia mamela anao hanara-maso ny famokarana;
Manampy anao amin'ny fametrahana fikorianan-taratasy elektronika ny automation;
Amin'ny fampiasana ny fampiharana dia azonao atao ny manatanteraka lisitra sy fanaraha-maso ny fivezivezena amin'ny trano fitehirizana;
Ny fanadihadiana ny famokarana akanjo vita dia manatsara ny asan'ny mpiasa; zarao am-pahalalana kokoa ny fotoana iasan'izy ireo;
Ny fiasan'ny mpiasa dia mizara mazava tsara ho faritra iankinan'ny andraikitra;
Ny mpiasa tsirairay dia afaka manana zony miditra isan-karazany arakaraka ny toerana sy ny fahefana;
Ireo modules dia mirakitra ny ora fanatanterahana ny asan'ny mpiasa tsirairay misaraka;
Ny latabatra ho an'ny mpiasa dia natsangana, mifototra amin'ny angon-drakitra tafiditra, isaina isa-karama na sangan'asa;
Ny asan'ny sampana mpamokatra dia ampifanarahana; ny mekanisma fifampiraharahana eo amin'ny samy mpiasa dia debugging;
Ny mandeha ho azy ny fampiharana kaonty famokarana fanjairana dia afaka manamboatra fampahalalana marobe sy manao asa maro;
Mora dia mora ny mametraka planina tokony hataon'ny elektronika, ary koa rafitra fampandrenesana sy fampahatsiahivana;
Ny tatitra dia mety hateraka ho azy amin'ny alàlan'ny fametrahana fotsiny ny fandaharam-potoana irina sy ny mason-tsivana;
Ny fampiharana dia manome fitehirizana azo itokisana sy kopia ara-potoana ny fampahalalana manan-danja rehetra;
Ny rantsana sy ny fizarazaran'ny orinasa manjaitra dia voarindra ho lasa rafitra tokana, raha mazava tsara ny fizotrany;
Ny fanadihadiana ny angon-drakitra momba ny automatisation ny kaonty famokarana dia tanterahina mitohy, ny tatitra tsirairay dia mety hiteraka amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny sehatry ny famantarana mifototra amin'ny valiny.